Allgedo.com » 2011 » June » 11
Home » Archive Daily June 11th, 2011 Somalia says killed top African al Qaeda operative Jun 11, 2011 MOGADISHU (Reuters) – Somali police said on Saturday that Fazul Abdullah Mohammed, Africa’s most wanted al Qaeda operative, was killed in the capital of the Horn of Africa country Tuesday.
Mohammed was reputed to run al Qaeda in east Africa, operated in Somalia and evaded capture for over a decade after being accused of playing a lead role in the 1998 U.S. embassy attacks in Nairobi and Dar... Ciidamo katirsan Alshabaab oo udhaqaaqay degmada Dhoobleey. Jun 11, 2011 Muqdisho, Somalia (AOL) – Dhaqdhaqaaq ciidan oo aad u xoogan ayaa laga soo sheegayaa inay ka jirto Degmada Dhoobleey oo ay isku horfadhiyaan Ciidamada Dowladda iyo kuwa Alshabaab.
Sida ay sheegayaan dad ku sugan duleedka Degmada Dhoobleey ciidamo Alshabaab ah oo aad u fara badan ayaa u dhaqaaqay dhanka Degmada Dhoobleey oo bilooyin ka hor ay dagaal ku qabsadeen Ciidamo kala taabacsan Axmed Madoobe... Xaalada amaan ee degmooyinka DKMG ah oo kasii dareysa kadib khilaafka cusub ee madaxda Dowladda (Warbixin). Jun 11, 2011 Muqdisho, Somalia (AOL) – Xaalada Degmooyinka ay dowladda KMG ah ka maamusho Gobolka Banaadir ayaa ah mid ay sii xumaanayaan Xaaladaheeda amni kadib khilaafka Siyaasadeed ee u dhaxeeya Madaxda ugu sareeysa Dowladda.
Khilaaf xoogan ayaa horay uga dhaxeeyay Shariif Sheekh Axmed iyo Gudoomiyaha Baarlamaanka KMG ah kaasoo kala qeybiyay Hay’adaha Dowladda iyo xubanaha Baarlamaanka kadib markii... AMISOM oo kuhanjabtay inay sii wadi doonaan Dagaalada ay kula jiraan Xarakada Alshabaab. Jun 11, 2011 Muqdisho, Somalia (AOL) – Ciidamada AMISOM ayaa shaaciyay in dilkii wasiirka arrimaha Gudaha Xukuumada KMG ah aysan saameyn ku yeelan doonin dagaalada ay kula jiraan Xarakada Mujaahidiinta Alshabaab.
Hadal qoraal ahaa oo kasoo baxay Xafiiska Ciidamada AMISOM ayaa ugu horeyn looga tacsiyeey shacabka Soomaaliyeed geerida Wasiirka isla markaana lagu sheegay in C/shakuur Xasan Faarax uu ahaa nin... Madaxda Dowladda oo u tacsiyeeyay ehelada Wasiirkii arrimaha Gudaha. Jun 11, 2011 Muqdisho, Somalia (AOL) – Madaxda ugu sareeysa Dowladda KMG ah ayaa si wada jir ah u camaabaareeyay Qaraxiii shalay lala beegsaday wasiirka arrimaha gudaha C/shakuur Xasan Faarax.
Madaxweynaha DKMG ah Shariif Sheekh Axmed ayaa cambaareey Dilkii shalay loo geystay wasiirka Arrimaha gudaha ee shalay lagu qarxiyay gurigiisa oo ku yaala xaafada seybiyaano ee magaalada Muqdisho kadib hadal kooban... Radio Allgedo/ Waraysiyo